Isku-dhafan: Ku-gaarsiinta Ballanqaadka Shakhsi ahaaneed
Balanqaadkii shaqsinimo ayaa fashilmay. Muddo sanado ah waxaan maqalnay waxtarkeeda cajiibka ah, iyo suuqleyda doonaya inay ka faa'iideystaan ​​waxay ku iibsadeen xalal qiimo leh iyo xalal farsamo ahaan adag, kaliya waxaan ogaanay xilli dambe, inta badan, balan qaadka shaqsiyeynta ayaa ka yar qiiqa iyo muraayadaha. Dhibaatadu waxay ka bilaabmaysaa sida shakhsi ahaanta loo arkay. Waxaa lagu xalliyay xalka ganacsiga, waxaa lagu qaabeeyey muraayadaha lagu xallinayo baahiyaha ganacsiga markii run ahaantii
Moat by Oracle waa gorfayn gundhig iyo cabbiraad dhammaystiran oo siineysa xirmo xalal ah oo ku saabsan xaqiijinta xayeysiinta, falanqaynta taxaddarrada, gaadhista isdhaafsiga iyo soo noqnoqoshada, natiijooyinka ROI, iyo suuqgeynta iyo sirdoonka xayeysiiska. Qiyaasta cabirkooda waxaa ka mid ah xalalka xaqiijinta xayeysiinta, feejignaanta, badbaadada sumadaha, waxtarka xayeysiinta, iyo gaaritaanka iyo soo noqnoqoshada. La shaqeynta daabacayaasha, magacyada, wakaaladaha, iyo barxadaha, Moat waxay gacan ka geysaneysaa gaaritaanka macaamiisha mustaqbalka, qabashada dareenka macaamiisha, iyo cabiridda natiijooyinka si loo furo kartida ganacsiga. Moat by Oracle
Shanta Tilmaamood ee ugu Sareeya Dhisida Istaraatiijiyadda Mawduuca Hoggaanka Fikirka
Sabtida, Diisambar 12, 2020 Sabtida, Diisambar 12, 2020 Gurpreet Purewal
Cudurka faafa ee 'Covid-19' wuxuu iftiimiyay sida ay u fududahay in la dhiso - loona burburiyo summad. Xaqiiqdii, dabeecadda sida ay magacyadu u wada xiriiraan ayaa is beddeleysa. Dareenku marwalba wuxuu ahaa darawal muhiim ah go'aan qaadashada, laakiin waa sida ay magacyadu ugula xiriiraan dhagaystayaashooda taas oo go'aamin doonta guusha ama guuldarada adduunka kadib Covid. Ku dhowaad kala bar dadka go'aanka gaara ayaa leh fikirka hoggaanka ururku wuxuu si toos ah gacan uga geystaa dhaqankooda wax iibsiga, laakiin 74% shirkadaha ayaa leh
6 Isbeddellada Teknolojiyada ee 2020 Suuq Kasta Waa Inuu Wax Ka Ogaado
Khamiis, May 7, 2020 Wednesday, May 6, 2020 Christina Lyon
Wax qarsoodi ah maaha in isbeddelada suuqgeynta ay la soo baxaan isbeddello iyo hal-abuurnimo tikniyoolajiyad ah. Haddii aad rabto in meheraddaadu istaagto, keento macaamiil cusub oo aad ku kordhiso muuqaalka khadka tooska ah, waxaad u baahan doontaa inaad firfircooni ka muujiso isbeddelada tiknoolajiyada. Ka fikir isbedelada tiknoolajiyada laba siyaabood (iyo maskaxdaada ayaa sameyn doonta farqiga u dhexeeya ololeyaasha guuleysta iyo cricket-ka ee falanqayntaada): Ama tilaabooyin qaado si aad u barato isbeddellada oo aad u adeegsato, ama looga tago. Tan dhexdeeda
Talaado, Juun 18, 2019 Monday, June 17, 2019 Samuel Kellett
Sharax kooban oo ku saabsan waxa isgaarsiinta Omni-channel yahay iyo astaamo iyo istiraatiijiyad gaar ah oo ku dhex jirta kooxaha suuqgeynta si loo kordhiyo macaamiishooda 'daacadnimada iyo qiimaha.